IINGCINGA EZIPHEZULU ZE-73 ZE-SLEEVE SLEEVE TATTOO [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELA] - UHLOBO
Iingcinga eziphezulu ze-73 ze-sleeve sleeve Tattoo [2021 Isikhokelo sokuphefumlela]
Kwabathembekileyo nakwizinikeleyo, ezi zoyilo zemikhono zibonisa umoya oyingcwele. Ukusuka kubuBuddha ukuya kubuKrestu, ubuKatolika nangaphezulu, iseyile nganye eyindoda inemfundiso ezingapheliyo.
Xa kufikwa kunqulo, amadoda amaninzi athabatha inyathelo elilandelayo ngokubonisa ukuzibophelela kwabo ngohlobo lwe-inki esisigxina.
Imikhono nokuba sisiqingatha okanye igcwele, isebenza njengesikhumbuzo esiqaqambileyo sokholo lomntu. Umzekelo, uphawu lobuKristu, olumisela umzekelo wokuba nesisa nobubele kwabanye, nokuba abanye bayasilela ukubonakalisa isenzo esifanayo kuwe.
Abanye abanumzana babona iitattoo zonqulo ngenye indlela, benombono wokuba bangaze bakhathazeke. Endaweni yoko, qhubeka unokholo njengoko izinto ziya kuhamba ngendlela abayifunayo ekugqibeleni. Ungayichazanga eyokuba unezixhobo zokucoca i-inki unika elinye icebiso lokuba usoloko ubulela kwaye wonwabile.
Ewe kunjalo, zininzi ezinye iimfundiso ezilungileyo ezinokubonisa ngokuzingca nge-inki yokomoya. Kwesi sikhokelo seetottoo ezingcono ezingama-75 zemikhono yenkolo yamadoda, uya kuzifumana.
Iingcamango zeTattoo yeSleeve yeNkolo
Intle Uhlobo lweChicano UMadonna tattoo kumfanekiso osekhohlo, ngelixa lesibini umkhosi wamaKristu ubulala inyoka. Esi sibini iitattoo zonqulo veer ukusuka kwisithethe esingqongqo, ukhetha iindlela ezahlukeneyo zokumela inkolo kulusu. Yomibini le mi sebenzi ngamaqhekeza obugcisa obukhethekileyo, kunye nomsebenzi womgca kaMadonna, kunye nolusu lwenyoka oluziinkalo zobuchwephesha be tattoo nganye.
Umkhono opheleleyo wengalo esetyenziswe kwisitayile samandulo. Iitotto ezijolise kwabasetyhini zinxulunyaniswe kunye ngobuchule kunye nokukhomba umda wokulinganisa okwenziwe ngwevu kunye nomsebenzi womgudu ongasebenziyo. Umfuziselo wenkolo we Intombikazi enguMariya , ingelosi, Cupid kunye nehobe, uqhuba intsingiselo yenkolo emkhonweni.
UBuddha ekucamngeni. Lo mkhono wengalo ugcweleyo usebenza ngesimbo saseJapan sokulinganisa umbala kunye nomthunzi. Iintyatyambo ze-lotus kunye neemonki zibonelela ngombala oqaqambileyo kunye nomzobo omnyama obalekayo, usebenza ngempumelelo ngokuchaseneyo ne-swathes emnyama, ngwevu, kunye indawo engalunganga shading esetyenziselwa ukwenza inkcukacha kuyo yonke ingalo.
Olu luphawu olusemgangathweni olumnyama kunye grey, ngakumbi ngokuhamba ngokugqwesileyo kwengubo yengelosi, amaphiko, kunye nokuvuka. Kuphela kukhupha lo tattoo womkhono yiwotshi / isangqa selitye emva kwentloko yengelosi - ngumfanekiso ongaqondakaliyo osusa kwezinye iindawo eziphezulu zeenkcukacha ezigqwesileyo (umgca omnyama kunye nomthunzi usebenza kakuhle apha).
I tattoo entle yamaKatolika yokuxuba izinto zokholo kunye kwiseti yokubamba yemifanekiso ye-inki. Esi siqwenga sinqabile kuba singadluli ekuzameni ukudibanisa umfanekiso ngamnye kunye - kukho umsebenzi othile womthunzi (ubukhulu becala kwingalo ephezulu) kodwa igcisa kunye nesihloko banelisekile ngokusebenza nomxholo wokholo. Ngokukodwa indlela i-rosari eboniswe ngayo njengoluhlu lweembalo eziwela ngaphaya kweengalo phakathi kwecawa kunye ne-rose rose.
Esi sifuba kunye nokudityaniswa kwengalo ephezulu kuhanjiswe kakuhle. UBuddha kunye nemiphumo ejikelezileyo-i-lotus, i-mandala, itempile-zonke zilungelene phantsi kwe-inki emnyama emnyama nengwevu. Isakhono se tattooist sisebenzisa indawo engalunganga ukukhulisa imifanekiso endaweni yokuzalisa ukwahlula oku kokulunga nje, ukuya ekubeni kukhetheke. Imane yengonyama kunye noboya obenziwe mnyama bumile.
I-tattoo entle, ecacileyo, phantse yeklasikhi. UBuddha kule meko wenziwe ngobuqili ukuba abukeke njengelitye eliqingqiweyo, ukusuka entlokweni yakhe ukuya kwiJnana Mudra ezantsi. Kulo mqondiso i-mudra ibonisa ukufundisa. Ukusetyenziswa kwesithunzi esimnyama sokugcwalisa emva kwentloko kaBuddha yindlela elungileyo yokwenza umthunzi kwaye kunceda ukomeleza iprofayili yakhe.
Inguqulelo entsha yesikolo sikaBuddha ebhalwe kwi-3D. Olu luphawu oluphezulu lwe tattoo olubonisa ukuzimisela ukuthatha amathuba ekwakheni nasekufiphiseni ukuvelisa ubugcisa bomzimba obubambekayo. Ukutshintsha komthunzi phakathi kukaBuddha kunye nempahla yokunxiba kuyimbonakalo, ngakumbi isikali senamba njengegiye zentloko
Le tattoo kaBuddha ibonisa ukuthungwa kwezobugcisa okuphawulekayo kunye nebala kwiinkcukacha ezimnyama nezimvi kulo lonke ubude bomkhono opheleleyo. Ukucaca komsebenzi wecandelo kwicandelo ngalinye kubonisa usetyenziso olungenasiphako lweinki. Igcisa lenze ubume obahlukeneyo kunye noburhabaxa kuso sonke isiqwenga, emva koko sandisa naphina apho kunokwenzeka ngokuphuhlisa kunye nokudibanisa utshintsho olukhanyayo kumthunzi kulo lonke.
Iseti egqwesileyo, eyahlukileyo yamaphiko eyenziwe ngobuchule obugqwesileyo bokuxuba isithunzi esingwevu kunye nendawo engathandekiyo kwintsiba nganye, emva koko uthambe ngaphambi kokuya kokulandelayo. Ijongeka iphantse yagqibelela. Owona msebenzi uphambili uphantse wasikrola isithsaba kunye nejelayim liqinile kwaye lisetyenziswa kakuhle, ngelixa iingelosi ezinkulu nezincinci zisebenza kakuhle ngokuchaseneyo ngokuthe ngqo kubungakanani, iinkcukacha kunye nolwalathiso. Eli licandelo elibalaseleyo lobugcisa bomzimba.
Umnqamlezo we-3D luphawu olumangalisayo lwale tattoo yonqulo. Isakhono somzobi sokwenza ukuba ijongeke ibunjiwe ngomthi okanye ikhutshiwe ngaphandle komhlaba kuxhomekeke kwi-engile yinqanaba lesikhundla sokuyila. Ilawula yonke i-inki ngenkalipho, uyilo lobukrelekrele nangona ikhangeleka icacile - akukho filigree okanye fanciness nokuba ngumnqamlezo okanye uYesu. Xa into yoyilo enje ihlawula kamnandi ihlala isenza itattoo engalibalekiyo.
Orthodox endlwini. Le tattoo iphantse yagqitywa ngokwenkolo yenza umkhono wengalo oxakekileyo ongayifuniyo into edlula. Umsebenzi womthunzi unengqondo, iiTattoo zangaphambili zisongwe ngokulula (ngamanye amaxesha konke okufuneka ukwenze ngumthunzi kumda wefonti), ngelixa isithsaba kunye nemifanekiso yamehlo ziindawo ezijolise kuzo. Kusekho i-rose tattooing ekhohlo ukuyigqiba, inokugcwaliswa ngombala omnyama nampunga, okanye ipapa ngombala oqaqambileyo ojikeleze intloko kaYesu.
Le tattoo yenkolo eyenziweyo eyenziwe ngokutsha. Endaweni yokuba enze isigqubuthelo esimnyama esimnyama se tattoo engalweni ephezulu umculi ukhethe ukuvuselela isiqwenga ngeenkcukacha ezimbi ezimnyama ze agqibe njengomkhono opheleleyo wengalo. Umsebenzi otshintshayo omnyama, ongqindilili upholile kakhulu ngokuchasene nendawo engalunganga yendawo yokugcwalisa. Ityala 'Ndithanda izinto zakho ezintsha ngcono kunezinto zakho ezindala.'
Ifani yomvambo kwingalo yangaphambili
izitena zangaphandle kwendlu
igama loyilo lwamadoda kumadoda
Umthandazo wezandla une tattoo yerosari
Ndicebisa malini ngomculi we tattoo
Intlanzi ye-koi yin yang tattoo
iiTattoos ezingahleliwe zajika zaba ngumkhono